Zvinodiwa uye vagadziri
Saizi ye Fermenter inotora mukushandiswa kwesekushandisa sosi uye Iyo yakakosha midziyo ye Fermenter inogadzirwa ne 316L simbi isina tsvina. Iko kudzvanyirirwa kwekuumbwa: P (mukati) = 0.3Mpa, P (interlayer) = 0.3Mpa, Iyo polishing chaiyo: Ra0.4 ～ 0.6, chiyero chiri pakati pehupamhi nekukwirira: 1: 2.5.
Mechaniki yekuisa sisitimu kumusoro kweiyo fermenter; yakakwirira-pamhepo inosimudza oar, antifoam oar; AC magetsi emuchina (SEW): isingagumi kumhanya kusiyanisa; rpm mu 500L germ Fermenter: 70 ~ 400rpm ± 1% rpm;, Iyo yakareba yeakisi inosimudzira inogona kugadziridzwa, zvakare.
Kupisa netiyeredhiyo mvura tangi uye inotenderera nekutenderera poturu (Grundfos, Denmark), autocontrol (inotonhora mvura + 5 ℃) ~ 70 ℃ ± 0.1 ℃ ， tembiricha yekushisa (inosvitswa)
2.00-12.00 ± 0.05pH, autocontrol nekuwedzera asidhi uye base, pH sensor (Hamilton / Mettler, Switzerland) uye yekudzivirira lead (Hamilton / Mettler, Switzerland).
0-150 ± 3% inoratidza chaiyo 0.1%, sensor (Hamilton / Mettler, Switzerland) uye yekudzivirira lead (Hamilton / Mettler, Switzerland)
Kuedzwa nesencor uye kwakawedzera antifoamer ne peristaltic pombi
manyowani control ventilatory kugona, iyo chaiyo nhaler: 0.1μ, inoratidzwa nehurefu. Iyo huwandu hwekuyerera kugadzirisa kwe 10000L germ Fermenter: 0 ~ 20000L / min
Manual kudzora kuneta ne diaphragm cell vheji, uye inoratidzwa nekumanikidzwa kwegeji.
Mapaipi uye mavhavha ari kusangana neye zymotic fluid anogadzirwa ne 316L simbi isina tsvina, mavhavha ari diaphragm cell vharuvhu
BLBIO S Kudzora Sisitimu: pane-saiti controller, inotevera vashandi veiyo Nokia S7-200 inoteedzera PLC control system, iri rakakura, rakagadzikana, rakasarudzika mhando yePCC, inokodzera dzakasiyana siyana dzekushandisa otomatiki, kunyanya mukugadzira nzira yekudzora Chikumbiro. . Yayo modular, iri nyore kuita yakagoverwa kugadziriswa uye nyore kubata uye zvichingodaro, Motorola PLC yekudzora nzvimbo yave inozvarirwo maitiro ekugadzirisa ekugadzirisa ndeyehupfumi uye yepamusoro yekudzora system, iyo system inoshandisa yekubata screen kuratidza, pane-saiti yakananga mabasa (menyu mhando), ese Chirungu menyu uye interface; zvakare nekombiyuta inomiririra yekuparadzira data, sampling yedata uye dhizaini yekutarisa, iwo maonero ehurongwa hwekuongororwa kwedata, kurongedza kuverenga.
10-inch LCD inobata-inoyerera screen seinoratidzira kuratidza yakazara yakazara-yakapfuma, inoshandisa-ushamwari-screen iri nyore, nyore kubata. Uye kuvhiringidza mumwe nemumwe. Iyo control system inokwanisa kujairana neakasiyana siyana maser sensors uye maeatorator kubudiswa kwechiratidzo chekuisa neine chiratidzo chekurwisa-jamming system.
Kuunganidzwa kwedata uye module yekudzora: Motorola S200 PLC controller uye kuunganidza data uye kutonga module
① Kudzora kwemanyoro: Unogona kuseta chikamu chevhurumu yakavhurika kana vharuvhu kuvhura ② otomatiki yekudzora maitiro: Unogona kusarudza kuenderera kana PID PID inodzora switch ③ inoteedzana kudzora: kutonga kwema parameter ese kunogona kutangira-kungasvitsa chikamu gumi chekutonga , ④ ye otomatiki chikamu chikamu kudzora kudzora: PC kutonga ⑤ inogamuchirwa yekubatana kudzora: mweya wakanyungudika unogona kusarudza kumhanya, kufambisa kwemhepo chiyero, tangi kumanikidza, kutonga kwekupa chikafu, nezvimwe .; pH inogona kusarudza kutonga ne acid uye alkali
3. XY-axis yekuraira kufambira mberi chaiko kunogona kunge kuri chero kuwanda uye kusagadzikana kwemifananidzo yekuratidzira, kubatsira unoshanda kuti azive mafambiro ekudyidzana pakati pemhedzisiro yeiyo Fermentation maitiro ekukurumidza kugadzirisa uye kugadzirisa
5. Controller kuzvidzivirira basa: kuisa password, vamwe havakwanise kuchinjisa mafaro ezvirongwa; uye iyo controller haina kurasikirwa nekuda kwesimba yemagetsi kune imwe paramende
9. ratidza iyo controller iri kumhanyisa chaizvo kupokana, iyo danho rakaraira mamiriro ehurumende system, process hardware, uye inofambisa chimiro chinongedzo chekunzwisisa zvishandiso zvakasiyana (sepistaltic pombi, kutenderera mapombi, kupisa, kusanganisa, nezvimwewo) chimiro chebasa, Kutadza kuzivikanwa kunogona kushandiswa sekuratidzwa